Sida loo Beddelaan MP4 in iPad (iPad Air, iPad Mini 2, iPad mini ka mid ah)
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan MP4 in iPad u Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
Haddii aadan ka ciyaari kara MP4 on iPad, sababta ay tahay in aad MP4 video ma u dhigma shuruudaha hab-dhaqan ee Lugood qaab ay taageerayaan iyo qaab iPad taageeray. Hadda uun waxaad isku dayi kartaa a video Converter xirfadeed ee iPad in ay si fudud u xaliyaan dhibaatada ay diinta MP4 in file ayaa si buuxda u taageeray by iPads kala duwan oo aan arkeyn goobaha koobin.
Qeybta 1: Best desktop video Converter --_ 1_181_1_
Qeybta 2: Free online video Converter
Qeybta 3: Su'aalaha ku saabsan ciyaaro MP4 on iPad
Horena filaayo in tiro balaadhan oo ah qalabka, sida iPad mini 2, iPad Air, mini iPad, iwm
Taageerada diinta videos kala duwan ama Cajalado.
Samee masterpiece movie by shakhsiyeeyo aad video ay feature video tafatirka xoog badan ah.
Tayada wax soo saarka sare, ilaalinta tayada 100% aad file asalka ah.
Socodka hanaanka shaqada ee 30X xawaare ka dhaqso badan wax converters conversional.
Maxaad Dooro Video Converter Ultimate (Windows / Mac)
Beddelaan inay iPad
Waxa ay taageertaa si loogu badalo in ay noocyo badan iPad, sida iPad Air, iPad mini 2, iPad 2, iPad Cusub, iwm
Taageerada Wide Qaabka
Waxaad awoodi kartaa in qaybtii loogu badalo aad file ama ka qaab kasta oo la AAN tayada khasaaro.
Habee movie MP4
goo, dalagga, isku shaandheyn, iyo dar Cinwaan ama saamaynta si loo kobciyo aad movie MP4 aan dadaal.
30X Conversion Speed
​​Waxay u qabata xawaare ugu dhaqsiyaha badan marka la barbar dhigo oo dhan la gediyay on suuqa.
Sida loo isticmaalo Video Converter Ultimate >>
Guide: Sida loo badalo MP4 in iPad
1. Ku dar MP4 video files si MPEG4 in ay Converter iPad.
Ka dib markii download iyo rakibi video Converter this u iPad, fadlan guji "Add Files" on interface ugu weyn ee software-ka. Waxaad kale oo jiidi karaan jeedi faylasha aad u galay. Tan iyo markii arjigan taageertaa diinta Dufcaddii, waxaad ku shuban kartaa faylasha sida ugu badan aad rabto
2. Dooro nooca iPad sida qaab wax soo saarka
Tani MP4 in Converter iPad ayaa presets filaayo in badan oo qalab kala duwan. Kaliya Waxaad riix kartaa button fallaadhiina waxay hoos Qaabka Output, guji "Device", ka dibna dooran model ipad aad ka yar "Apple" category.
Availiable iPad Presets: iPad mini 2, iPad Air, iPad mini, iPad 4, iPad, iPad 2, iPad Cusub.
3. U beddelaan MP4 in iPad
Fadlan riix badhanka Converter ugu hooseysa, ka dibna ugu dhakhsaha badan loo beddeli doonaa video. Markaasay aad u hagaagsan kartaa video in Lugood in iPad si ay u raaxaystaan.
Video Tutorial: Sida loo Beddelaan MP4 in iPad
Waxaa jira halkan si toos ah in ka badan. Isku day this video online Converter free halkan. Waxaad heli doontaa waxa aad rabto.
Su'aal: Waa maxay Lugood taageeray Fomrmat iyo iPad ay taageerayaan qaab?
Fadlan hubi hoos ku qoran 2 miisaska, Lugood Qaabka ay taageerayaan iyo iPad Qaabka ay taageerayaan .
Su'aal: iPad taageertaa qaab video aan. Waa maxay sababta aan weli ma u ciyaari karaa iPad?
Tusaale ahaan, MP4 waa weel multimedia la codecs kala duwan ah. Waxaa laga yaabaa in aad codec MP4 aan ay taageerayaan Lugood ama iPad. Si aad u xallin dhibaatadaada, fadlan isku day kaliya Video Converter Ultimate si loogu badalo MP4 in qaabka la jaan qaada Lugood iyo iPad.
Shaxda 1: Lugood ay taageerayaan Qaabka
MPEG-4 la riixo H.264
File kordhin: .mp4, .m4v, .mov
Video Qaabka: MPEG-4 la H.264
Data Rate: Ilaa 160 Kbps
Rate jir ah, 30 looxyada halkii labaad
Key jire ah: kasta 24 looxyada
File kordhin: .m4a
iPod nano, 3aad / 4aad / 5aad gen.
Qaabka Audio: Gundhiga Low-Kakanaanta Profile la AAC-LC (Music)
MPEG-4 qaab video
iPhone, dhammaan tusaalayaashii
Kanaalada: rikoodh in .m4v, qaabab .mp4, iyo .mov
iPhone 3GS, 3G iyo Original
Rate Sample Output: 48 kHz
iPad, dhammaan tusaalayaashii
Tayada Deji: Better
File kordhin: .mp3
Shaxda 2: qaabab ay taageerayaan iPhone, iPad, iPod.
H.264 qaab video
ilaa 720p, 30 looxyada / labaad
ilaa 2.5 Mbps at 640 x 480, 30 looxyada / labaad
ilaa 1.5 Mbps at 640 x 480, 30 looxyada / labaad
4-gen. iPod taabashada
iPod taabto, dhamaan noocyada kale
iPod Classic, dhammaan tusaalayaashii
ilaa 2.5 Mbps at 640 x 480 pixels, 30 looxyada / labaad
ilaa 768 Kbps at 320 x 240, 30 looxyada / labaad
4-gen. iPod taabto, dhammaan tusaalayaashii
ilaa 2.5 Mbps at 480 x 480 pixels, 30 looxyada / labaad
Motion jpeg qaab video
ilaa 35 Mbps ee 1280 x 720 pixels, 30 looxyada / labaad
Sida loo Beddelaan QuickTime MOV in MP4 sida dhaqsaha badan ee Mac / Win
BDMV Converter: Sida loo Beddelaan BDMV in AVI, MP4, MOV (Quicktime)
Ma ciyaari karo Files MP4 ku Madaxweyne Siilaanyo Oo 360? Xaliyay
Sida loo Beddelaan AVI in MP4 Iyadoo Loss Tayada Zero ee Mac / Win
Sida loo dar SRT in MP4
Talooyin Dhibaatooyinka u QuickTime Arrimaha Common ayaa